TAARIIKHII GUUD EE VIETNAMESE Qorista - Qaybta 2 - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
Dugsiga Farshaxanka ee Jaamacadda George Mason
… Wuxuu u socday qeybta 1
Latin-ka rasmiga ah Xarfaha Vietnamese wuxuu ka kooban yahay sagaal iyo labaatan xaraf: shan iyo toban konton iyo laba iyo toban meelood. Marka laga reebo f, j, w, Iyo z, laba iyo labaatan xaraf ayaa ka yimid xarfaha Roman. Toddobada xaraf ee wax laga beddelay waa ă, â, đ, ê, ô, ơ, Iyo ư. Sida Ingiriisiga, amarku wuxuu raacayaa heshiiskii xarfaha Romania. Waraaqaha leh calaamadaha diacritical-ka waxay soo baxaan kadib xarfaha la'aan. Tusaale ahaan, a ka hor ă iyo d ka hor đ. Soo-saarista soo socota ayaa lagu dhigaa dugsiyada.
Xarfaha rasmiga ah ee Latin-ka ee Fiyatnaamiis
Vietnamese Waxay leedahay tiro badan oo waraaqo ah oo leh calaamado diacritical ah si ay u sameeyaan kala sooca tonal. Dalabka calaamadaha codadka waa kala duwan yihiin, laakiin waxa ugu caansan waa Nguyễn Đình HòaShirweynaha: cod aan astaan ​​lahayn (ngang), degdeg ah (sắc), qabriga (huyền), kor ku xusan (hỏi), tilde (ngã), Iyo hoos udhac (nng). Sababtoo ah xarfuhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kala sooca dhawaaqyada, shaqe kasta wuu qaadan karaa hal ama labo astaamo dheeri ah. Kuwa soo socda 134 xaraf (jumlad yar iyo kaar) soo bandhigaan dhammaan suurtagalnimada dikriticsiga Fiyatnaamiis.
Astaamaha calaamadaha Vietnamese
LUUQADAHA LAGU SAMEEYEY
Sida lagu muujiyey alifbeetada, Nidaamka qoraalka Vietnamese isticmaalka Toddobo xaraf oo wax laga beddelay. Afartaan waxay kala tageen astaamaha diacritical: ă, â, ê, Iyo ô. Saddexda waxay xireen astaamo diacritical ah: đ, ơ, Iyo ư. Cutubkani wuxuu bixiyaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xarfaha wax laga beddelay.
The â Waxay leedahay wareeg 'wareejin' korka warqad a. A-wareegtadu waxay qaadan kartaa isugeyn degdeg ah ( a ), qabriga ( a ), kor ku xusan ( a ), tilde ( a ), ama hoos udhac ( a ). Fiyatnaamiis dhexdeeda, waxaa loo isticmaalaa weel loo yaqaan 'itiv-qaabeeya' weel isu eg e ( ê ) iyo o ( ô ).
The đ waxay leedahay xarig iskutallaab ah waraaqda d. The đ waa shibbane keliya-bilow ah. Albaabka sare Đ waxay leedahay xariiq toosan bartamaha dhexda dusha sare ee warqad D. Boorsada hoose đ leeyahay bar bartanka u dhexeeya ascender iyo x-dhererka xarafka d.
The ê Waxay leedahay wareeg 'wareejin' korka warqad e. Cudurka loo yaqaan 'e-Wareeg' wuxuu qaadan karaa xaalad daran E ), qabri ( E ), jillaab kor ( E ), tilde ( E ), ama hoos u dhigid ( E ). Fiyatnaamiis dhexdeeda, waxaa loo isticmaalaa weel loo yaqaan 'itiv-qaabeeya' weel isu eg a ( â ) iyo o ( ô ).
The ô Waxay leedahay wareeg 'wareejin' korka warqad o. Cudur-wareegga 'o-Wareeg' wuxuu qaadan karaa xaalad daran o ), qabri ( o ), jillaab kor ( o ), tilde ( o ), ama hoos u dhigid ( o ). Fiyatnaamiis dhexdeeda, waxaa loo isticmaalaa weel loo yaqaan 'itiv-qaabeeya' weel isu eg a ( â ) iyo e ( ê ).
The ơ wuxuu leeyahay gees gees leh kuna lifaaqan midigta warqadda o. O-geesku wuxuu qaadan karaa xaalad daran o ), qabri ( o ), jillaab kor ( o ), tilde ( o ), ama hoos u dhigid ( o ). Fiyatnaamiis, gees ayaa sidoo kale loo isticmaalaa u ( ư ).
The ư wuxuu leeyahay gees gees leh kuna lifaaqan midigta warqadda u. Bugta 'cir-cirku' waxay qaadi kartaa xaalad daran u ), qabri ( u ), jillaab kor ( u ), tilde ( u ), ama hoos u dhigid ( u ). Fiyatnaamiis, gees ayaa sidoo kale loo isticmaalaa o ( ơ ).
Fiyatnaamiis waa a luqadda tonal. Qoraalka waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo lix cod oo kala duwan:heerka"(ngang), "xanaaq daran"(sc), "hoos-u-dhigid"(huy.n), "jilicsan-kor u kaca" h.i, "laab-laab"(ngã), iyo "laab-culus"(n.ng). Qoraal ahaan, hal cod ayaa u taagan sidii astaan ​​la'aan (a), afar waxaa lagu muujiyey jaantus tilmaamayaal lagu calaamadeeyay a shaqal ( á, à, a, Iyo ã ), iyo mid waxaa lagu calaamadeeyay dhibco dhibic hoostiis ( a ). Aynu jebinno shakhsiyaadkaas calaamadaha codadka.
Cod aan astaan ​​lahayn (ngang) wax cod ah ma leh. Booskiisa wuxuu u dhexeeyaa bartamaha illaa bartamaha-bartamaha.
An degdeg ah (dắu sắc) waa amarkii hore loo dhaadhiciyay ee loo dhajiyay shaqalada: á, é, í, ó, ú, Iyo ý. Xanuun daran, oo ka bilowda cidhiidhi cidhiidhi ah oo ku dhammaada dusha sare, waxaa loola jeedaa garoonka oo sare u kaca. Waa inuu waxyar u kacaa dhinaca midig ee astaamaha saldhiga ( á -isay) Wax aan dhicin. Marka la isku daro, waa in si cad loogu meeleeyaa calaamad kale ( a, a, E, o, o, ama u ).
A qabriga (dhuu huyền) waa amarad gadaal gadaal u jeedsan oo lagu dhajiyay shaqalada: à, è, ì, ò, ù, Iyo y. Qabri, oo ka bilaabmaysa dusha ballaadhan oo ku dhammaanaya hoose cidhiidhi ah, ayaa tilmaamaysa daarad hoose. Waa inuu waxyar u kacaa dhinaca bidix ee astaamaha saldhiga ( à -isay) Wax aan dhicin. Marka la isku daro, waa in si cad loogu meeleeyaa calaamad kale ( a, a, E, o, o, ama u ).
Xarig kor ku xusan (dỏu hỏi) waa calaamad cod oo u eg calaamad su'aal aan dhib lahayn oo la galiyay shaqalka: a, E, waxaan, o, u, Iyo y. Waxay tilmaamaysaa garoonka hoose ee hooseeya. Marka la isku daro, waa in si cad loogu meeleeyaa calaamad kale ( a, a, E, o, o, ama u ).
A tilde (du ngã) waa ambiil lagu dhajiyay shaqalada dhawan: ã, E, ĩ, õ, ũ, ama y. Waxay ka dhigan tahay garoonka soo kacaya. Marka la isku daro, waa in si cad loogu meeleeyaa calaamad kale ( a, a, E, o, o, ama u ).
An hoos udhac (dặu nặng) dhibic ayaa la galiyaa dhaarta: a, ẹ, aad, ama, ụ, Iyo y. Waxay tilmaamaysaa garoonka hooseeya ee hoos u dhaca waana in si cad loogu meeleeyaa salka aasaasiga.
Continued lasoco qeybta 3…
1: Ku saabsan qoraaga: Donny Trương waa naqshadeeye leh xiise u leh suugaanta iyo websaydhka. Wuxuu ka helay Masterkiisii ​​Farshaxanka ee sawirka naqshada isagoo ka yimid Dugsiga Farshaxanka ee Jaamacadda George Mason University. Isaguna waa qoraaga Naqshadeynta Websaydhka Xirfadeed.
Words Erayada geesinimada leh iyo sawirada sepia waxaa dejiyay Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com
◊ TAARIIKHII GUUD EE VIETNAMESE Qorista - Qaybta 1
◊ TAARIIKHII GUUD EE VIETNAMESE Qorista - Qaybta 3
(Booqday jeer 2,437, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 2,901
← Magacyada Vietnam
Laga soo bilaabo SKETCHES bilowgii qarnigii 20-aad ilaa XAALADAHA GUUD iyo FESTIVAL →
Comments Off Bulshada LU ee 54 kooxaha qowmiyadeed ee Vietnam
Comments Off on dheer XUYEN - Cochinchina
Comments Off ku saabsan SUUGAANTA DHAQANKA iyo FARSAMADA MARTIAL ee VIETNAM - Qaybta 3
Booqashada Maanta: 152
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,073
Guud ahaan Wadarta: 285,968